Looxyada caloosha: sida ay tahay inaad u tababarto | Ragga Stylish
Markii aan ku biirno jimicsiga waxaan raadineynaa jir jir leh oo aan ku arki karno lixda xirmo ee caanka ah. Maqnaashaha waa layliyo ku xeeran been abuur iyo aaminsanaan been ah oo ku saabsan koritaankooda iyo horumarkooda. Mid ka mid ah jimicsiyada ugu isticmaalka badan ee lagu hagaajiyo caloosha ayaa ah looxyada caloosha. Jimicsiyadan ayaa loo tixgeliyey inay yihiin kuwa ugu wanaagsan ee lagu horumarin karo aagga caloosha oo dhan. Si kastaba ha noqotee, illaa xad intee le'eg ayay faa'iido leeyihiin, intee in le'eg ayay soconaysaa, intee jeer ayaan tababarnaa, noocyo noocee ah ayaa waxtar leh, iwm.
Waxaan ku xallin doonnaa dhammaan shakigaas maqaalkan halkaasoo aan si qoto dheer uga hadli doonno looxyada caloosha.
1 Cunto caloosha wanaagsan
2 Looxyada caloosha iyo noocyada kala duwan
3 Waxtarka looxyada caloosha
Cunto caloosha wanaagsan
Kahor intaanan ka hadlin caloosha caloosha iyo sida ay tahay inaan u fulino una tababbarno, waa inaan ka hadalnaa qodob aasaasi ah. Cuntada sida jimicsiga. Waa inaan ogaano taas, si aan u helno murqaha, waxaan u baahanahay inaan ku jirno siyaado kalooriyaal ah oo ku jira cuntada si joogto ah waqti dheer. Taasi waa, waa inaan ku qaadnaa qayb ka mid ah waqtiga jimicsiga helitaanka murqaha iyo waqti kale luminta dufanka xad-dhaafka ah. Si tan loo sameeyo, laba waji oo loo yaqaan wejiga mugga iyo wejiga qeexitaanka ayaa la sameeyaa.
Marxaladda mugga, oo ah weji faa'iido badan oo murqaha ah, waxaan u adeegsanaa cuntada si aan u soo saarno wax yar oo kalooriyeyaal ah, oo ay weheliso borotiin sare, waxay naga caawineysaa inaan soo saarno unugyo muruq cusub. Dhibaatadu waxay tahay in inta lagu jiro marxaladdan si lama huraan ah ay tahay inaad xoogaa dufan ah ku hesho hawsha. Sidan oo kale, calooshayadu uma muuqan doonto wax muuqda mana awoodi karno inaanu muujinno maqnaansho. Si kastaba ha noqotee, Waa geedi socodka lagama maarmaanka u ah in la abuuri karo ABS taas oo markaa la muujin karo inta lagu jiro wajiga qeexitaanka. Inta lagu jiro wejigan, waxaan lumineynaa dufanka aan helnay mugga iyo "soo bandhigidda" maqnaanshaha.
Marka tan la caddeeyo, waxaan falanqeyn doonnaa dhammaan looxyada caloosha iyo noocyadooda kala duwan.
Looxyada caloosha iyo noocyada kala duwan
Sanduuqa caloosha waxaan isku dayeynaa inaan cadaadis ku saarno dhammaan aagga asaasiga ah si aan u soo saarno dhiirigelin ku filan oo ku qasbeysa unugyada inay horumariyaan. Tani waa sida aan ugu korino muruqeena aagga caloosha. Si kastaba ha noqotee, badanaa waa jimicsi aad u culus oo waxaa jira noocyo kala duwan oo heerarka oo dhan ah.
Waxaan dooneynaa inaan falanqeyno kuwaas oo ah noocyada ugu muhiimsan ee cirridka caloosha.
Saxanka oo leh beddelaad taageero ah: Waa ta aan ku dhejinayno booska asaga oo gacmaheena fidsan iyo mid ka mid ah xusullada oo isweydaarsanaya si markaa barta taageeridu ay tahay wejiga hore. Sidan oo kale, waxaan sidoo kale dhawaaqi doonnaa gacmaha.
Plank la laaban: Noocyada noocan ah, waxaan ku helnaa booska looxda oo ma jiifsan doonno dhulka oo ku tiirsan curcurada iyo xeebta. Waxaan soo laabaneynaa xusulkeena si aan ugu soo dhowaanno dhulka oo aan u taagno dhowr ilbiriqsi illaa aan mar kale gacmaha kala bixinno.
Hal Balance Balance Plank: laga soo bilaabo booska looxyada waxaan kala soocnaa hal lug oo dhulka ah waxaanan isku dayeynaa inaan ilaalino isku dheelitirka dhowr ilbiriqsi. Lugta ayaan dhulka ku nasan doonaa markale si aan ugu celcelino layliga lugta kale.
Birta Superman: tan ayaa caan ku ah qolka jirdhiska. Waxay ka kooban tahay kor u qaadida hal gacan oo isku mar ah iyo lugta kale ee ka soo horjeedda. Jidhku wuxuu ahaanayaa mid isku dheelitiran oo ku saabsan qodobbada taageerada.
Ku beeran jilib ilaa laabta: Waxaan isku dhejineynaa booska loo yaqaan 'plank booska' waxaanan tagnaa si jilib ah oo aan u keenno laabta.
Plank leh boodbood: waxaa loogu talagalay in lagu falanqeeyo wareegyada misigta qaarkood. Waa nooc jimicsi u baahan xoog jirka oo dhan.
Dhammaan noocyadan kala duwan waxaan sidoo kale ka helnaa layliyo kubbadda kubbadda cagta laga ciyaaro. Waa in maskaxda lagu hayaa in si loo isticmaalo kubbadda kubbadda cagta kuma liidi karno lumbar oo had iyo jeer waxaan xuddunta u ilaalinaynaa saqafka. Sidan oo kale, waxaan iska ilaalinaa nooc kasta oo dhaawac ah. Waxaan sidoo kale leenahay noocyo kala duwan oo loox ah oo aan ku istaageyno dhinaceena iyadoo xusulku ku nasanayo garabka. Waa inaad cagahaaga isku soo ururisaa oo jirkaaga ka soocdaa dhulka. Waa inaad si toos ah u ilaalisaa qaddarinta dhulka.
Waxtarka looxyada caloosha
Maaddaama ay jiraan dad badan oo u hanqal taagaya inay qabtaan caqabadaha looxyada caloosha, waa inaan ogaanno inay tahay inaad fuliso layligan. Jimicsiga noocan ah, murqo badan ayaa lagu shaqeeyaa. Muhiimadda ugu weyni waxay saaran tahay abdominis-ka malawadka iyo dhinaca kore.. Si kastaba ha noqotee, inaad si buuxda u xasilloon tahay waxaad sidoo kale u shaqeyn kartaa qayb ka mid ah garabka, laabta oo aad ku lug leedahay xoogaa tijaabo ah. Waxaan sidoo kale sameynnaa xoogaa jimicsi jirka ah. Marka lagu meeleeyo booska looxa, waxaan aragnaa inaan dalbaneyno xoogaa shaqooyin miskaha ah iyo femoris quadriceps.
Waa inaan xusuusnaano taas, waxaan lahaan karnaa murqo aad u horumarsan, oo ah haddii aan leenahay lakab yar oo sentimitir ah oo dufan ah xagga hore ma awoodi doonno inaan wax aragno. Sidaa darteed, jimicsiga noocan ah waa in lagu daraa cuntada hypocaloric si loo yareeyo boqolkiiba baruurta iyo layliyo kale oo jimicsi leh.
In kasta oo ay tahay jimicsi leh waxtar wanaagsan, waa inaad farsamada si fiican u qabataa. In kasta oo ay tahay jimicsi aan dhaqdhaqaaq lahayn, haddana waa inaynaan u tixgelin inay tahay jimicsi ka xor ah dhaawacyada suurtagalka ah. Maaha jimicsi lagula taliyay dadka qaba culeysyo culus ama dhabarka hoose. Waxaad u baahan tahay inaad u jeesato tababare shakhsi ahaaneed si aad u qiimeyso xaaladdaada. Sidoo kale waa inay si fiican u saxaan farsamadaada si ay u sameeyaan meelayn wanaagsan.
Haddii aynaan farsamada si fiican ugu qabanin looxyada caloosha, culays fara badan ayaanu saari karnaa aagga lumbar iyadoo qallooc badan leh. Sidan oo kale, waxaan ku helnaa laf-dhabarka si aan u xanuunno. Qaab kale oo dadku badanaa u jahwareeriyaan laylisyadan ayaa ah soo noqnoqoshada. Caloosha waa in loo tababaraa sidii muruq kale oo kale. Waa inuu lahaadaa xoojin, mugga tababarka iyo soo noqnoqoshada iyadoo loo eegayo heerkeenna iyo ujeedkeenna Maxaan raadineynaa. Ha iloobin in maqnaashaha sidoo kale ay u baahan yihiin nasasho si ay awood ugu yeeshaan inay si wanaagsan horumar ugu sameeyaan.
Ugu dambeyntiina, isla waa isku mid muddada. Waa inaan ka badnaan mudada looxa caloosha maadaama aan dhaawici karno lumbar.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto looxyada caloosha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Fitness » Looxyada caloosha